Monday June 05, 2017 - 07:30:03 in Somali News by Super Admin
Saraakiil ka tirsan Sirdoonka Madaxtooyadda Somalia ayaa Waagacusub u xaqiijiyay inuu xalay kulan qarsoodiya dhexmaray Madaxweyne Farmaajo iyo Afhayeenka Al-Shabaab.
Saraakiil ka tirsan Sirdoonka Madaxtooyadda Somalia ayaa Waagacusub u xaqiijiyay inuu xalay kulan qarsoodiya dhexmaray Madaxweyne Farmaajo iyo Afhayeenka Al-Shabaab. Kulanka oo la sheegay iney si wadajira uga soo shaqeeyeen Dowladda Qatar,Agaasimaha cusub ee Madaxtooyadda Fahad Yaasiin iyo Marwadda Farmaajo ee lagu magacaabo Seynab Macalin ,oo Afhayeen Cali dheere adeer u yahay ayaan la oggeeyn wixii laga wada hadlay laakiin kulan laba saacadood socday kadib ayaa Afhayeenka dib loogu qaaday gobolka Shabeeladda hoose .
Sawirkaan waa Screenshot laga qaaday Video-ga kulanka Farmaajo iyo Cali Dheere
Video lagu duubay kaamirooyinka loo yaqaan CCTV ayaa muujinaya iyagoo wada hadlaya ,oo Afhayeenka Al-Shabaab Mr Cali Dheere qoslaa.
ila wareedyo muhiima ayaa sheegay in todobaadkaan uu kullan kan la mida oo qarsoodiya ka dhici doono dalka Qatar.
Kulanka dhexmaray Afhayeen Cali Dheere iyo Madaxweyne Farmaajo ayaa ku beegan xilli Dowladaha Khaleejka xiriirka u jareen Dowladda Qatar oo lagu eedeeyay iney maalgelin dhaqaale siiso argagixisadda Al-Shabaab iyo ISIS.
Si kastaba ha ahaatee, waxeey Warbaahinta Waagacusub soo gudbin doontaa xoggo dheeriya inshaa allaah.